Wadahadalkii Afgaanistaan - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
La daabacay tisdag 2 november 2010 kl 09.01
Mona Sahlin, Fredrik Reinfeldt iyo Peter Eriksson oo shir-jaraaid qabtay. Foto: Leif R Jansson/Scanpix.
Ciidammada dalkan Iswiidhen kaga sugan Afgaanistaan ayaa noqon doona wixii ka horreeya dhammaadka sannadka 2014 ciidan taakuleeyn, halka ey iminka ka yihiin kuwo weerar .
Waa mid ku cad go’aan ey si wada-jir ah u gaareen maamulka dawladda, xisbiga Sooshiyaaldimoqoraadiga iyo xisbiga Dooggu, laguna soo bandhigay shir-jaraa’id oo ey si wada-jir ah u qabteen madaxa dawladda Fredrik Reinfeldt iyo hogaamiyeyaasha labada xisbiga ee Sooshiyaaldimoqoraadiga iyo xisbiga Doogga.
Madaxa dawladda Fredrik Reinfeldt ayaa isbedelka ku macneeyay sidan:
- Mararka qaarkood ayaan ku magacownaa in mulkida lagu wareejiyo reer afgaanistaan, heeyadaha cadaaladda iyo ammaanka maamulka bulshada afgaanistaan annaguna aan gadaal ka taageerno.
Heeshiiskan ayaa noqon doona mid socda dhammaan afarta sannadood ee foodda innagu soo haya illaa laga gaaro doorashada 2014, hase yeeshee ka qeeyb-qaadashada dalkani gacanta ugu fidin doono dalkaa uu noqon doono mid halkiisii ka socda muddo dheer.
Iyada oo awoodda la saaro taageerada dhaqaale ee bulshada in sannadka 2012 la bilaabo dhimista ciidammada dalkan kaga sugan Afgaanistaan. Sidoo kale ciidammo iswiidhish ah ey ka hoowl-galaan Afgaanistaan sidey gacan uga geeysan lahaayeen tababarka ciidammada wixii ka dambeeya sannadka 2014.
Mid ka mid ah labada hogaamiye ee xisbiga Doogga Peter Eriksson ayaa sheegay inuu ku qanacsan yahay heshiiska wada-jirka loo gaaray:
- Isbedelladani waxey dhici doonaan sannadaha foodda innagu soo haya, halka sannadka 2012 la arki doono isbedel muuqda ee suurta-gelinaya dhimista ciidammada dagaalama. Goolka aannu wada hiigsaneyno waa in la soo af-jaro ugu dambeeyn sannadka 2014. Sidoo kale waxaannu heshiis ka nahay in la abuuro hogaan maamul shibil ah sannadka 2012 hoowshiisuna tahay abaabulka taageerada dalkani ka geeysto Afgaanistaan, middaasina macnaheedu tahay calaamadin lagu qeexayo is-bedel lagu sameeyo istraatiijiyada iyo in xoogga la isugu geeyo sannadaha foodda innagu soo haya taageerada hoowlaha bulshada ee reer Afgaanistaan.
Waxaannu ka mideeysannahay oo kale in kor loo qaado taageerada mucaawino ee hoowlo cayiman sida: caafimaadka, dhismaha waddooyinka iyo la dagaalanka musuq-maasuqa. Sidoo kale si loo hormariyo taageerada dhaqaale ayey heshiis ku gaareen in la abuuro guddi ay madax ka tahay wasiirka taageerada caalamka soo koraya Gunilla Carlsson.